कसरी टुट्छ बालबालिकाको विश्वास ? – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित २० बैशाख २०७८, सोमबार १७:३५
यस्तो स्थितिमा उक्त बच्चा कस्तो मनस्थितिबाट गुज्रिरहेकाे होला ? न उनी यो कुरा कसैसँग खुलस्त बताउन सक्छन् न मनभित्रै दबाएर बस्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ ? उनीसँग कुनै ठोस निर्णय पनि छैन ।यस्तो मनोदशामा केही दुर्घटनाको जोखिम हुनसक्छ । मातापिताको दुराचरणबारे बच्चालाई थाहा छ । यसले उनलाई निकै दुःखी बनाएको छ । भय पैदा गरेको छ । तर, उनी स्वयम् निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अर्थात् यी सबै कुरामा उनी केही गर्न समर्थ छैनन् ।